Mmebi E Nwere na Istanbul Metro Na-aza Site na Ntinye ọ bụla! | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulMmebi E Nwere na Istanbul Metro Na-aza Site na Ntinye ọ bụla!
Ihu ojoo obodo Istanbul metro metro nke nzaghachi dị mma
Vidio e dere na Ọktọba na Istanbul Metro 29 dọtara nnukwu mmeghachi omume. 10 na ụzọ ụgbọ oloko. Nwa amaala nke nwere akwa, nke na-esote ụmụ amaala Afọ Anthem, nọ na-aga njem ya na-emeghị ihe ọ bụla ma na-ekwughi onye ọ bụla. N'oge a, onye ọrịa nwere ike tụgharịa igwefoto ekwentị ya. Pụtara bọtịnụ nke mkpasu iwe ahụ site na ibipụta onyonyo mmemme nke nwa amaala nke akwa ahụ. Ọtụtụ iri mmeghachi omume nye onye gbara vidiyo ahụ zoro mmiri ozugbo enwere ike.
29 na Istanbul Metro N’ọnwa Ọktọba, ihe mere na mbido mgbasa ozi mgbasa ozi. 10 bụ otu ụmụ amaala na-eme njem ụgbọ oloko n'oge a na-eme ememme ụbọchị Republic. Ọ malitere ịbụ abụ nke afọ. N'ime oge ịnụ ọkụ n'obi ụmụ amaala ahụ, enwere nwa amaala nke nwere akwa mwụda ahụ.
AKWOVKWỌ EGO NA-EGO
N'oge a, aka na-anwa ịdọrọ ihe omume ahụ gaa na mpaghara ọzọ, gbanye igwefoto ekwentị ekwentị. Onweghi ihe di n’etiti ememe a dika odi n’obodo ndi uwe ojii bidoro na-ese vidio dika ihe anaghi adiri ya. O zughi na iwere foto ndị ahụ na ịntanetị ma chụọ iwe ahụ. N’oge na-adịghị anya ụmụ amaala niile meghachiri omume na onye nwere nzube nke dọtara vidiyo ahụ.
Onye nnọchi anya CHP Istanbul Mehmet Bekaroğlu “Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti nwa amaala a mere ndị ụmụ nwanyị yi uwe dị mkpụmkpụ? Ndị na-eme ihe a na-emebi obodo a na mba a, na ndị nwere ezi uche na okwukwe na ụdị ndụ niile ga-akwụghachi omume ọjọọ ndị a nnukwu. (Sözcü)
Akụkọ ọbara na Ankara Metro na-azọpụta Ndụ
Na ọtụtụ ọrụ ọpụpụ na Pendik ụzọ ụgbọ oloko…
Nkwupụta banyere nje ọkụ na Ankara ụzọ ụgbọ oloko
Akwa nzaghachi na mgbasa ozi mgbasa ozi na okporo ụzọ Metrobus!
Azịza dị ukwuu na Zamma Zaman na Osmangazi Bridge!
Nzaghachi nke abụọ nke Imamoglu maka onye na eche maka ndị Gar:
Ụzọ Istanbul na-ezu ohi 219 anyị kwa afọ
Kwa ụbọchị, 140 na-ebuga Istanbul Airport
Mpụ na Istanbul Metro
10 na ụzọ ụgbọ oloko. Afọ Anthem
Ememe Republic Day na ụzọ ụgbọ oloko